खबर मञ्च, Author at खबरमञ्च - Page 4288 of 4534 खबरमञ्च
You are here: Home > Articles by खबर मञ्च - Page 4288
बार्सिलोनाका बच्चाले जिते विश्व च्यालेन्ज कप
By खबर मञ्च / August 30, 2016 / खेलकुद / Comments Off on बार्सिलोनाका बच्चाले जिते विश्व च्यालेन्ज कप
एजेन्सी – बार्सिलोनको एकेडेमिका रहेका बच्चाहरुको टिम बीले विश्व च्यालेन्ज कपको उपाधि जितेको छ । जापानमा भएको प्रतियोगितामा घरेलु टोली ओमयालाई १–० ले हराएर उपाधि जित्यो । उपाधि जितेका बार्सिलोनाका खेलाडीले मित्रताको राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् । हारेपछि रोइरहेका ओमयाका खेलाडीलाई बार्सिलोनाका खेलाडीले सान्त्वना दिए । उनीहरुले जितको खुसी ओमयाका खेलाडीलाई सान्त्वना दिएर मनाएका […]
जापानी विदेश राज्यमन्त्री आज नेपाल आउँदै
By खबर मञ्च / August 30, 2016 / राजनीति / Comments Off on जापानी विदेश राज्यमन्त्री आज नेपाल आउँदै
काठमाडौँ। जापानका विदेश राज्यमन्त्री नोबु किसाइ नेपालको तीनदिने औपचारिक भ्रमणमा आज राति काठमाडौं अाउँदै छन् । नेपाल र जापानबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ६०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा यही भदौ १६ गते यहाँ आयोजना हुने विशेष समारोहमा भाग लिन उनी नेपाल अाउन लागेका हुन् । नेपाल सरकार र यहाँस्थित जापानी राजदूतावासले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्ने उक्त समारोहलाई प्रधानमन्त्री […]
अमेरिकाकाे मिनिसाेटामा तेश्रो पटक पनि कुकुरनै मेयरमा निर्वाचित ! (भिडियोसहित)
By खबर मञ्च / August 30, 2016 / विश्व विचित्र / Comments Off on अमेरिकाकाे मिनिसाेटामा तेश्रो पटक पनि कुकुरनै मेयरमा निर्वाचित ! (भिडियोसहित)
​एजेन्सी- अमेरिकाजस्तो विकशित देशको सहरमा मान्छे नभई कुकुर मेयर हुन्छन् भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्नु स्वभाविकै हो । विश्वको तेश्रो धेरै जनसंख्या भएको देशमा मान्छे नै नपुगेर वा मान्छेको क्षमता नभएर कुकुरलाई मेयर बनाइएको त पक्कै होइन होला । आखिर किन पछिल्लो तिन कार्यकाल लगातार उक्त सहरमा एउटै कुकुर मेयर पदमा निर्वाचित भैरहेको छ त ? […]
चुट्किलाः स्वर्गमा दुई सुन्दरी !
By खबर मञ्च / August 30, 2016 / कला / साहित्य / Comments Off on चुट्किलाः स्वर्गमा दुई सुन्दरी !
​दुई जना महिलाको भेट स्वर्गमा भयो । पहिलो महिला– तिम्रो मृत्यु कसरी भयो नि ? दोश्रो महिला– फ्रिजमा चिसो लागेर मरे बित्थैमा, अनि तिम्रो नि । पहिलो महिला– के भन्नु यार, बिपी बढ्यो मेरो । दोश्रो महिला– कसरी नि ? पहिलो महिला– लोग्नेका कारण नि, त्यसको कोही अर्कैसँग चक्कर छ भन्ने थाहा पाए, अझ मेरै […]
मोरङका विद्यार्थीले बनाए पानी माथी कुद्ने साइकल
By खबर मञ्च / August 30, 2016 / शिक्षा / Comments Off on मोरङका विद्यार्थीले बनाए पानी माथी कुद्ने साइकल
​मोरङ, भदाै १४ । मोरङको हाथिमुडामा रहेको मनमोहन पोलीटेक्नीकल कलेजका विद्यार्थीले पानीमाथि कुद्ने साइकल बनाएका छन् । बाढी आइरहेका बेला उद्धार गर्ने उद्देश्यले मनमोहन टेक्निकल कलेजका मेकानिकल इन्जिनियरिङका विद्यार्थीले पानीमाथि कुद्ने साइकल बनाएका हुन् । विद्यार्थी बर्जित थापाको समूहले सो साइकल बनाएको हो । उनले भने, “बाढीको बेला उद्धार गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले साइकल प्रयोगमा […]
By खबर मञ्च / August 30, 2016 / राजनीति / Comments Off on प्रधानमन्त्रीले बोलाए प्रमुख तीन दलको बैठक
​काठमाडौं, भदौ १४ । प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल‘प्रचण्ड’को आब्ह्वानमा प्रमुख तीन दलको बैठक बसिरहेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केहीबेर अघि सुरु बैठकमा स्थानीय निकायको संख्या निर्धारण, संविधान संसोधन, आर्थिक विधेयक लगायतका बारेमा छलफल हुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । उनले भने–‘प्रधानमन्त्रीको आब्ह्वानमा प्रमुख दलका शीर्षनेताहरुको बैठक राखिएको हो ।’ बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट […]